Ny Anguilla dia nitatitra tranga COVID-19 voalohany
Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Ny Anguilla dia nitatitra tranga COVID-19 voalohany
Anguilla nitatitra ny tranga COVID-19 voalohany teto amin'ny nosy taorian'ny nahazoany fampandrenesana avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamam-bahoaka Karaiba (CARPHA) omaly, ny 26 martsa 2020, fa ny 2 amin'ireo santionany 4 nalefa tamin'ny alatsinainy 23 martsa, dia voaporofo fa tsara ny viriosy covid-19 ary 2 no nisedra ny ratsy.
Ny tranga tsara voalohany dia tranga nafarana - vehivavy mpitsidika 27 taona avy any Etazonia, tonga tao Anguilla tamin'ny 11 martsa. Ny tranga tsara faharoa, lehilahy 47 taona, mponina, dia nifandray akaiky tamin'ity tranga voalohany ity. Ity koa dia famantarana ny fandefasana eo an-toerana. Araka ny fanao amin'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fifehezana sy fisorohana ny fiparitahan'ny olona, ​​izay samy nanana soritr'aretina malemy dia napetraka mitokana rehefa ahiahiana ary mijanona mitoka-monina izy ireo amin'izao fotoana izao.
Ny mpiara-miasa amin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny fahasalamana dia nanomboka ny fanarahan-dia mahery vaika mba hahalalana ny olona tsirairay izay mety nifandray akaiky tamin'io marary io. Ny olona rehetra fantatra amin'izany dia hapetraka amin'ny quarantine sy hosedraina.
Ankoatr'izay, ny fepetra lavitra momba ny lavitra ho an'ny besinimaro araky ny voalaza ao amin'ny drafitra fanamafisana ny fepetra ho an'ny COVID-19 dia hambara tsy ho ela.
Ny governemantan'i Anguilla dia niomana amin'ny fahatongavan'ny COVID-19 hatramin'ny faran'ny volana janoary ary nanentana ny mponina izy ireo mba tsy hikoropaka fa kosa hitari-dalana amin'ny fampiharana mahasoa izay azonao atao mba hisorohana ny fihanaky ny COVID-19. Amin'izao fotoana izao, amin'ny totalin'ny tranga ahiahiana 9 an'ny COVID-19, 5 no nanaporofo fa ratsy, 2 no nosedraina, ary 2 no miandry.
Ny mpikambana amin'ny besinimaro dia entanina indray mba hanaraka fidiovana, etikety taovam-pisefoana, ary hanaraka ny torolàlana manalavitra ny fiaraha-monina mba hisorohana ny fihanaky ny COVID-19. Ny minisiteran'ny Fahasalamana sy ny governemanta Anguilla dia manamafy fa ny fahasalamana sy ny filaminan'ny firenena no laharam-pahamehana indrindra.
Hanohy hanome vaovao ara-potoana sy marina ny Minisitra raha mbola mivoatra hatrany ny raharaha. Ireo olona izay manana fanontaniana na ahiahy mety nosedrain'izy ireo tamin'ny COVID-19 dia tokony hiantso ny laharam-pifandraisan'ny Ministera amin'ny 476-7627, izany dia SOAP 476 na 584-4263, izany dia 584-HAND.
Fonosana fanampiana COVID-19: Ny dikan'izany amin'ny indostrian'ny dia amerikana
Munoz: United Airlines dia tsy hanao volom-borona amerikana an-tsitrapo na hihena